dual sim ကို SMS Messenger ကို Download လုပ်ပါ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » dual sim ကို SMS Messenger ကို
dual sim ကို SMS Messenger ကို APK ကို
သင်သည်သင်၏စတော့ရှယ်ယာကို Android messaging app တစ်ခုဆင်းလှသောအစ်မ, စူပါအစာရှောင်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းစိတ်ကြိုက်အခြားရွေးချယ်စရာရှာဖွေနေပါသလား?
ကောင်းပြီ, ယနေ့သင်၏အကံကောင်းနေ့ဖြစ်၏။ dual sim ကို SMS Messenger ကို 2018 ရိုးရှင်းစွာထူးချွန်ပါ! ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်က 2018 messaging app, ရိုးရှင်းသောအလိုလိုသိ, စိတ်တိုင်းကျနှင့်ပျော်စရာပါ!
dual sim ကို SMS Messenger ကို 2018 ကို SMS, MMS ကိုနှင့်ထို့ထက် ပို. အသုံးပြု. မည်သူမဆိုနှငျ့ဆကျသှယျဖို့လွယ်ကူစေသည်။ , မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူထိတွေ့နေဖို့အုပ်စုတစ်စုကျမ်းပေးပို့, သင်၏အကြိုက်ဆုံးရုပ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, အသံမက်ဆေ့ခ်ျများမျှဝေပါ။
dual sim ကို SMS Messenger ကို 2018 လှပသော themes များ, ချစ်စရာကောင်းတဲ့အီမိုဂျီအမည်ပျက်စာရင်းအင်္ဂါရပ်, Pop-up windows နှင့်အများကြီးပိုလာပါတယ်။ ကျနော်တို့ SMS ကိုအောင်ဖို့သန္နိဋ္ဌာန် Plus အားပိုမိုမြန်ဆန်, ဘေးကင်းနှင့်အသုံးပြုသူ-friendly ဖြစ်တယ်။ messaging ဒါမှပျော်စရာနှင့်အထိရောက်ခဲ့တာဘယ်တော့မှခဲ့သည်!
အဆိုပါ Block option ကိုမလိုချင်တဲ့ & spam များကို SMS နဲ့ MMS ကိုမှသင်၏စစ်မှန်သောကယ်တင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်လည်းသင့်ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားဖျက်ဆီးထံမှထို pestering မက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ရှောက်မည်သည့်အပိုဆောင်း SMS ကို blocker app ကို install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဒါဟာအလိုအလျှောက်လုပ်ကွက် spam များကိုမက်ဆေ့ခ်ျ။ ဒါကြောင့်သင်က spam များကို-အခမဲ့ Inbox ထဲမှာခံစားနိုငျ
dual sim ကို SMS Messenger ကို 2018 features တွေအားလုံးအစဉ်အမြဲအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ ရံဖန်ရံခါသင်တစ်ဦးကြော်ငြာမြင်ရပါလိမ့်မယ်, သို့မဟုတ်သင်သည်အစဉ်အမြဲကြော်ငြာတွေကိုဖယ်ရှားမယ့် VIP အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်သင်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ VIP သီးသန့် themes များဝင်ရောက်ခွင့်ရ!
dual sim ကို SMS Messenger ကို 2018 တော်တော်လေးအထူးဖြစ်၏ ကကြိုးစား, သင်၏မိတ်ဆွေများကိုပြောပြသည် treetops ကနေအော်, ဒါပေမယ့်အားလုံးအများစုကပျော်မွေ့!
ကျွန်ုပ်တို့၏ app ကိုအထက်က Android ™ 4.4 running devices များ, Kit Kat, နှင့်ကထောက်ခံသည်။
smsplus@junkyapps.com မှာကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို Send နှင့်ငါတို့ကဲ့သို့အစာရှောင်ခြင်းတတ်နိုင်သမျှပြန်သင်ရလိမ့်မယ်။
ဤသည်က App က Samsung, Huawei Sony နဲ့ HTC ကကဲ့သို့အဖုန်းများကို၏ကွဲပြားခြားနားသောအမှတ်တံဆိပ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
dual sim ကို SMS Messenger ကို 2018 များအတွက်သီးသန့်လုံခြုံရေးပေါ်လစီ: getsmsplus.com/sms-plus-themes-privacy-policy/
Fixed VIP bug ကို, စိတ်မကောင်းယောက်ျားတွေ ^^
dual sim ကို SMS Messenger ကို 2018
17.17 ကို MB
ကီးဘုတ်နဲ့ SMS ကို Plus အား